musha Asia Politicians Xi Jinping Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yeXi Jinping inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yehucheche Nyaya yake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Pano, tinokutsanangurira zvizere kuongorora kweChinese President's Biography, imwe inokupa chokwadi chezviitiko zvinozivikanwa kubva pamazuva ake ekutanga aXi Jinping, kusvika paakatanga mukurumbira.
Hupenyu nekusimuka kweXi Jinping. ?: BusinessInsider uye CNN.
Ehe, munhu wese anoziva kuti Chinese wezvematongerwo enyika ndeimwe China zvazvino vatungamiriri vane simba. Nekudaro, ivo vanhu vashoma chete vakaverenga Xi Jinping's biography, iri rinonzwisisika. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Xi Jinping Nyaya dzeChidiki:
Imwe yeakatanga kuzivikanwa mufananidzo wemwana weXi Jinping. ?: BusinessInsider.
Kutanga, Xi Jinping akaberekwa musi wa15 Gunyana June 1953 kuguta guru reBeijing kuChina. Ndiye wechitatu pavana vana akazvarwa kuna amai vake, Qi Xin uye kuna baba vake, Xi Zhongxun.
Mudiki Xi akakurira muBeijing, iro guta rekuzvarwa kwake pamwe chete nevakoma vaviri hanzvadzi uye munin'ina. Masisita aya anosanganisira Qi Qiaoqiao (dangwe remhuri) & Qi Anan nepo Xi Yuanping ari wekupedzisira mumhuri.
Xi Jinping Nyaya Yehudiki- Kukura makore:
Kukura muBeijing, Xi aive nemusanganiswa wekusimukira kwetsika uye nezvematongerwo enyika. Asi izvo, zvaisave zvisiri zvechokwadi kuona kuti Xi akakura semuchinda kunyangwe vabereki vake vaisave madzishe kana kuberekwa kumambo.
Mudiki Xi Jinping akakurira kuBeijing kuChina. ?: BusinessInsider uye WorldAtlas.
Xi Jinping Mhuri Yacho:
Taura nezvevabereki vaXi, baba vake Zhongxun vaive mukurumbira mutungamiriri webato reChinese. Kune rimwe divi, amai vaXi - Xin aive nhengo yebato rimwe chetero. Pamusana pechinzvimbo chehutungamiriri hweZhongxun mubato, Xi aizivikanwa seye 'princeling.' Izwi rekuti (Princeling) rinoshanda kune vanhu vane ramangwana rakajeka mukutonga nekuda kwekubatana kwemhuri.
Vanakomana vevatungamiriri veChina vakakurumbira vaizivikanwa saPrincelings. Xi Jinping nemunun'una wake vaive vasina kusarudzika. ?: BusinessInsider.
Xi Jinping Dzidzo:
Kunyangwe zvakadaro, Xi aive wekuzvininipisa kuzvibata zvinoenderana nemirairo yababa vake avo vakamudzidzisa kuve mukomana wenheyo aine simba rehunhu.
Zvidzidzo zvehucheche zvaive zvakanyatso kuve chikamu chemafungire pamwe nezvaitendwa naXi panguva yezvidzidzo zvake kuBeijing 101 Middle School muma1960 kudzamara Cultural Revolution ya1966 yaunza kukanganiswa kwedzidzo yake.
Xi Jinping Biography - Matongerwo Enyika Akatanga:
Shanduko yetsika haina kumira kusvika 1976. Yakatoona baba vaXi vachikandwa mutirongo.
Panguva imwecheteyo, iye-achiri kuyaruka akaendeswa kunhapwa kunoshanda mumusha wekurima wekumaruwa nekuti baba vake vaive mumwe wevanhu vazhinji vechiChinese vaifungidzirwa kuva nekutenda uye tsika dzinopesana nemafungiro echikominisi.
Pane imwe nguva panguva yekutapwa kwake, Xi akatanga kugara muimba yebako uye akaitwa kuchera migero.
Kukura uku kwakaita kuti ave munhu akaoma aine pfungwa yekushinga, pragmatism, uye fungidziro zvekuti akazove nhengo yeCommunist Party yeChina pamuedzo wake wegumi muna 1974.
Mufananidzo usingawanzoitika wake (agere pakati) nevamwe vanogara mumba yemubako maaigara mukati mehutapwa. ?: ChinaDaily.
Xi Jinping Pakutanga Kwematongerwo enyika Hupenyu:
Xi akaenderera mberi nekuenderera mberi nedzidzo yake kuBeijing Tsinghua University kwaakaverenga Chemical engineering kubva muna1975-1979, chiitiko chaakaita akabatana nekudzidza Marxism-Leninism- Mao Zedong akafunga pamwe nekushanda kwePeople's Liberation Army. Yakanga iri Kubva muna1979- 1985.Zvematongerwo enyika eXi akatanga kutora traction.
Kutanga kwaive kugadzwa kwake kwekutanga semunyori wegurukota rezvekudzivirirwa panguva iyoyo Geng Biao. Akaitwawo mutevedzeri wemutungamiri uye secretary-general weCentral Military Commission.
Xi akaenderera mberi achishanda munzvimbo dzakasiyana siyana mumatongerwo enyika kumatunhu anosanganisira Hebei (1982-1985), Fujian (1985-2002), Zhejiang (2002-2007), uye Shanghai (2007).
Aimbove Mutevedzeri wePurezidhendi uye Secretary-General weCentral Mauto Commission:?: CNN.
Xi Jinping Biography - Maitiro Ekubudirira Kwake Nyaya Yakatanga:
Kuchinja kwebasa rezvematongerwo enyika raXi kwakauya mukota yechitatu ya2007 paakaitwa nhengo yePolitburo Standing Committee. Komiti iyi imwe inoumbwa nehutungamiriri hwepamusoro hweCommunist Party yeChina.
Nekugadzwa, Xi yaive nhanho padyo nekuve anotevera mutungamiri weChina akapihwa rekodhi yake inonakidza. Nekudaro, hazvina kushamisika kuti Chinese National Legislature yakagadzira Xi mutevedzeri wemutungamiri wePeople's Republic of China panguva yegumi nematanhatu National People's Congress munaKurume 11.
Unogona here kuona iye mutevedzeri wemutungamiri wenyika achitambira mumwe wake panguva iyoyo Mutevedzeri weMutungamiri weU.S. Joe Biden kuBeijing muna2011? ?: CNN.
Xi Jinping Biography- Sei Mutungamiri weChinese Akava Mukurumbira:
Xi akaita zvakanaka kumiririra zvisarudzika zvido zveruzhinji pamwe nebato mumakore mana akatevera. Nekudaro, akakunda mavhoti eCentral 18th Committee yeCommunist Party yeChina kuti ave secretary general webato reCommunist Party pamwe nasachigaro weCPC Central Mil Army Commission musi wa 12 Mbudzi 2012.
Hazvina kutora nguva refu Xi asati aitwa Mutungamiri wePeople's Republic of China muvhoti yekusimbisa ne12th National People's Congress muBeijing musi wa14 Kurume 2013. Nekukurumidza pamberi paMay 2020, Xi achiri Mutungamiriri weChina.
Ane kubva pagore rekukwira kwake (2013) akaita shanduko inofambira mberi. Zvakare, mazano ake ehupfumi nekune dzimwe nyika akaita China nyika ine simba pasirese. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ona ndiani akazova Mutungamiri weChina muna 2013.?: BBC.
Xi Jinping Hukama Hupenyu- Mukadzi uye Mukunda:
Icho chinhu chinozivikanwa kuti Xi ane zvakabatikana mashedhiyo semutungamiriri wenyika uye mukuru wematare akawanda. Kunyangwe zvakadaro, haana matambudziko nekuchengeta imba yemuchato nemukadzi wake, Peng Liyuan.
Vakaroorana vakasangana muma1980 kuburikidza nesumo neshamwari. Peng aive panguva iyoyo muimbi ane mukurumbira apo Xi aisanyanyo kuzivikanwa.
Wakamboona uyu mufananidzo waXi nemukadzi wake Peng? yakadzokera kuma1980. ?: Twitter.
Vakave murume nemukadzi mu1987 uye vane mwanasikana pamwechete anozivikanwa saXi Mingze. Ndiye chete mwanasikana wemutungamiri weChina.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvake kunze kwekuti iye aive mudzidzi wechiFrench kuHangzhou Kunze Mutauro Chikoro uye akaenderera mberi achidzidza kuHavard mushure megore repaygraduate chikoro paZhejiang University.
Sangana naXi Mingze, mwanasikana akanaka waXi Jinping. ?: Twitter.
Waizviziva here kuti Xi aimbove murume waKe Lingling, mwanasikana waKe Hua aive mumiriri weChina kuUnited Kingdom mukutanga kwema1980?
Ivo vaviri vaive vari kunetsana pamwe nemumwe nguva zhinji kusvika pavakazoenda vakasiyana nzira makore akatevera.
Xi Jinping Hupenyu Hwemhuri:
Zvinotora mhuri huru kusimudza mutungamiri mukuru saXi Jinping. Tinokuunzira chokwadi nezve nhengo dzemhuri yaXi.
Zvimwe Zvizhinji nezve baba vaXi Jinping:
Xi Zhongxun ndiye baba vemutungamiri weChina. Akazvarwa musi wa15 Gumiguru 1913 uye akazove nhengo yeChinese Communist Youth League mu1926. Zhongxun akasimuka kuburikidza nezvematongerwo enyika kuti ave mutungamiri webato ane mukurumbira.
Zvisinei, basa raZhongxun rakanga risina kunaka. Akatambura kudzokororwa mune rake rezvematongerwo enyika asi zvakadaro aive akavimbika kune chaiko kudaidzwa kwechimurenga chikominisiti kusvika parufu rwake musi wa24 Chivabvu 2002.
Imwe yemifananidzo iripo yaXi Jinping nababa vake?: China Mazuva ese.
Zvimwe pane amai vaXi Jinping:
Qi Xin ndiye amai vemutungamiri weChina. Iye akazvarwa munaNovember 1926 uye ane nhoroondo yechiuto. Kutanga kushanda semutungamiri wechikwata kuCadre's Chikoro muChangshhi County, uye nekutora chikamu muhondo kuYincheng neXihuo Town.
Chii chimwe. Amai vanotsigira vana vana vari vapenyu kwazvo panguva yekunyora ichi chinyorwa pa Xi Jinping's biography.
Haisi nguva dzese paunosvika pakuona Xi Jinping naamai vake pamwechete. Iyi ndeimwe yenguva dzisingawanzo. ?: Zuva nezuvaMail.
Nezve Xi Jinping's Siblings:
Xi ine hanzvadzi mbiri dzakura - Qi Qiaoqiao & Xi Anan - pamwe nemunun'una Xi Yuanping. Qi Qiaoqiao, mukuru kuna sisi vaQi, bhizinesi munhu uye aimbova mukuru wehurumende.
Kune rake divi, Xi Yuanping ndiye mutungamiri weInternational Energy Conservation uye Environmental Protection Association panguva yekugadzirira ichi chinyorwa pane Xi Jinping's biography. Zvichakadaro, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve imwe hanzvadzi yaXi - Xi Anan.
Mufananidzo wakazara waXi Jinping nababa vake, amai uye vanin'ina. Musikana mudiki ari kumberi mwanasikana waXi Xi Mingze. ?: Twitter.
Nezve hama dzaXi Jinping:
Achienderera mberi kuna Xi Jinping madzitateguru kana midzi yemhuri, sekuru vake amai vaive Qi Houzhi nepo pasina marekodhi aambuya vake amai.
Saizvozvowo, vanasekuru navanamai vaXi havazivikanwe zvakanyanya apo hama dzake, vanatete nababamunini vasati vaziviswa. Nekudaro, isu tinoziva kuti vatezvara vake ndiDeng Jiagui (Qi Qiaoqiao murume) naZhang Lanlan (mudzimai waXi Yuanping).
Xi Jinping Hupenyu hweMunhu:
Ngatifambirei kune Chii chinoita kuti Xi Jinping arambe uye hunhu hwehunhu hwake kupfuura zvematongerwo enyika. Wanga uchiziva here kuti akangwara kwazvo, anofungidzira, ane rupo uye ane hunyoro mune tune sevanhu vane chiratidzo cheZodiac ndiGemini?
Kana Xi asiri kushanda, anogona kuwanikwa achifarira zera rake-refu uye zvinokuvaraidza zvinosanganisira kuverenga zvinyorwa pafilosofi, nhoroondo, mabhuku, tsika. Iye anofarirawo mimhanzi nemitambo pamwe nekushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Mufananidzo uyu chiratidzo cheimwe yemitambo yaanofarira. ?: ABC.
Xi Jinping Mararamiro:
Wanga uchiziva here kuti Xi Jinping mambure akakosha anomira pakufungidzira kwe $ 2 bhiriyoni sa2020? huwandu hwepfuma yaXi hunobva pamubhadharo nemubhadharo waakawana mukati memakumi matatu emakore ebasa reveruzhinji.
Kutenda chinzvimbo chake semutongi mukuru weChinese, Xi haigone kuwanikwa ichishayikwa mune chero chinodikanwa chinosanganisira zvinhu sedzimba nemota. Kunyangwe zvakadaro, anorarama hupenyu hwekuzvininipisa uye anokurudzira vamwe, mukuru weveruzhinji, kuti vafambe nenzira imwechete kuburikidza nemitemo yake yekurwisa huwori.
Aive akakosha madhora zviuru zviviri muna Chivabvu 2.?: CNN.
Xi Jinping Chokwadi:
Kuputira yedu Xi Jinping nyaya yehucheche uye biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisina chokwadi chokwadi nezvematongerwo enyika.
Chitendero chaXi Jinping:
Xi asingatendi anotenda muChinese Buddhism. Zvisinei, haasi mutendi akazvipira. Kuremekedza kwaXi kwechiBuddha kunonzi kunobva pakuti iye anoremekedza zvitendero zvechiChinese zvechivanhu uyezve nhoroondo huru yeChina iyo chiBuddha chiri chikamu chayo.
Bumbiro remitemo kubatanidzwa:
Havasi vazhinji vanoziva kuti huzivi hwezvematongerwo enyika hwaXi, hunowanzozivikanwa se "Xi Jinping Thought", chikamu cheCommunist Party Bumbiro. Muchokwadi, chirongwa chekufunda pfungwa dzaXi ndechimwe cheanonyanya kufarirwa maapplication eApple muChina.
Iko kune app ye Xi mifungo iri kuenderera kweMarxism, Leninism, Mao Zedong Kufunga pakati pezvimwe zvakateedzana zveChinese zvinotungamira mazano. ?: NYTimes.
Wakanga uchiziva here kuti Xi ndiye wekutanga mutungamiri wenyika yeChina ane degree rePhD? Akawana degree kubva pakudzidza Marxist dzidziso uye nezvematongerwo enyika paTsinghua University muBeijing.
Kuva Wokutanga Weazhinji:
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Xi Jinping ndiye wekutanga mutongi mukuru kuzvarwa mushure mekugadzwa kwePeople's Republic of China.
Ndiye zvakare wekutanga mutungamiri weChinese kuenda kumusangano wezvehupfumi hwenyika. Uyezve, ndiye mutungamiri wekutanga - kubvira Mao Zedong - kuti zita rake rinyorwe mubumbiro reChinese achiri mupenyu.
Haasi iye trailblazing? ?: Nguva.
Zita rizere Xi Jinping
Bhavhdhe 15th musi waJune 1953
vabereki Qi Xin (amai) & Xi Zhongxun (baba)
dzidzo Beijing 101 Middle Chikoro & Beijing's Tsinghua University.
Mwanasikana Xi Mingze
Vanun'una Qi Qiaoqiao, Xi Anan (hanzvadzi dzakura) & Xi Yuanping (munin'ina munin'ina)
Sekuru Qi Houzhi (sekuru amai)
zvinhu Kuverenga uye kuenderana nemitambo.
Net Worth Madhora mabhiriyoni maviri (kubvira 2)
urefu 5 tsoka, 11 inches.
pati Komiti yeCommunist yeChina (CPC).
Xi Jinping Upenyu Hwepfuura Nhoroondo uye Bio- Mhedziso Yedu:
Ndatenda nekuverenga ichi chekutanga nyora-pamusoro pehupenyu hwaXi Jinping. At ChildhoodBiography, isu tinoshandira kuringana uye nekurongeka mugwara redu rinowirirana re zvatinoita uye zvatiri- kuendesa nyaya dzehucheche uye nhoroondo yehupenyu.
Kana iwe ukaona chero chinotaridzika chisina kunaka mune ino chinyorwa, ndapota taura nesu kana isa chirevo pazasi. Pane kudaro, iwe ungave uine moyo unokwana kuti utiudze zvaunofunga nezve izvi zvekunyora-pa Xi Jinping's Biography?